Abbaa Alangaa Waliigalaa: Jigjigaa keessatti namootni 58 ajjeefamaniiru - BBC News Afaan Oromoo
Abbaa Alangaa Waliigalaa: Jigjigaa keessatti namootni 58 ajjeefamaniiru
25 Amajjii 2019
Goodayyaa suuraa Hokkora magaalaa Jigjigaa Adoolessa 28 hanga 30 bara 2010 ture
Yakka naannoo Somaalee magaalaa Jigjigaa keessatti adoolessa 28 hanga 30 bara 2010 raawwatameen namootni 58 ajjeefamuu isaanii Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa beeksise.
Ibsa daayrektarri komunikeeshinii dhaabbatichaa Obbo Zinaabuu Tuunu har'a kennanin, yakka ajjeechaa lammiilee magaalichatti raawwate pireezidaantii naannichaa kan turan Obbo Mahaammad Abdi Umar dabalatee, hooggantootni naannichaa duraanii qindeessaa akka turan himaniiru.
Yakkoota magaalaa Jigjigaatti raawwataman kunneen ji'oota shanan darbaniif poolisii federaalaa, tajaajila odeeffannoo fi tika biyyaalessaa fi poolisii naannoo Somaalee qaamolee walin qorachaa turre jedhaniiru Obbo Zinaabuun.
Haleellaan kan raawwatames saba Somaaleen alatti sabaaf sablammoota biroo irratti kan xiyyeeffate akka ta'es himaniiru.
Rakkoon magaalaa Jigjigaa lubbuu galaafate
Baqattoota Jigjigaa daandiiwwan Finfinneerratti
Abdii fi sodaa Dhaabni Mirga Namoomaa Itoophiyaarraa qabu
Yakka kanaaf preezidaantiin naannichaa duraanii qaama hoji raawwachiistuu mootummaa waamun ajaja dabarsaa akka turanis himameera.Namoota 58 ajjeefaman dabalataan namootni 260 ol immoo miidhaan qaamaa salphaa fi cimaa irratti qaqqabeera jedhan Obbo Zinaabuun. Dubartootni 10 ol qaama ijaarame fi Heegoo jedhamu fi humna addaa naannichaan gudeedamaniiru.
Namootni hedduus akka buqqa'an taasifameera.
Ajjeechaa sukkaneessaan raawwatameera kan jedhan Obbo Zinaabuun nama ibiddaan gubuu, morma gorra'uu akkasumas namni osoo lubbuun jiruu awwaaluu fi jimlaadhaan awwaaluun yakkoota magaalaa Jijjigaa keessatti raawwataman keessaa isaan muraasa akka ta'an dubbatan.
Qorannoo taasifamaa tureenis awwaalawwan jimlaa namootni 200 keessatti awwaalaman argamuunsaanii himameera.
Awwaalawwan jimlaa kunneen keessaa tokko mana amantaa Ortodoksii keessatti akka argame Obbo Zinaabuu Tuunuu dubbataniiru.
Kana malees qabeenyi dhaabbilee kunneen akka baankiwwan, inshuraansiiwwan fi manneen amantaa garee ijaarameen barbadaa'eeras jedhan.
Baankiilee Jigjigaatti torban darbe saamaman
Yaaddoo barattoota yuunivarsitii Jigjigaa
Humna federaala irraa dhufu mara ni waraanna jechuun waraanaaf akkasumas naannicha foxxoqsuuf of qopheessaa turan jedhan. Hojiileen qorannoo muraasni kan hafan jiraatullee yakkawwan kunneenin shakkamanii namoota 46 irratti himatni hundaa'uutti akka jiru Obbo Zinaabun dubbatan.
Kunneen keessaa 6 to'annoo jala kan oolan yemmuu ta'u to'annoo jala kan hin oolle keessaa ajajaan humna addaa naannichaa akka argaman himameera.
Namootni ammaaf hin qabamne to'annoo jala oolanii gara biyyaatti akka deebi'an gochuuf biyyaalee itti baqatan walin dubbataa jirra jedhan.
Kanneen biyya keessatti dhokatan qabuufis gareen of danda'e dhabbatee hojiirra akka jiru Obbo Zinaabun himaniiru.
Kana malees namootni mirga himatamuu dhiisuu qaban mirgi isaanii kun akka ka'ufis hojjetamaa jira jedhan.
Dhimma Obbo Barakat Simoon ilaalchisee galmeen qorannoos ta'ee himatni nuti hordofaa jirru hin jiru jedhaniiru. Dhimma Obbo Getaachoo Asaffaa ilaalchisee naannoo Tigraay walin dubbataa jirra.
Tarree shakkamtoota keessaa Obbo Ahimad Shidee akka hin argamanes himaniiru.
Waldhabdeen gaafa Sambataa magaalaa Jigjigaatti dhalate lubbuu galaafate
HRW: Jijjiiramni Itoophiyaa keessatti dhufe hanqina dhaabbiilee walabaan danqamuu mala
20 Hagayya 2018
Baankiilee Jigjigaatti torban darbe saamaman dabalatee kaanis hojii dhaabaniiru
10 Hagayya 2018
Rakkoo Yuunivarsitii Jigjigaa barattootaaf 'yaaddoo' ta'e
11 Muddee 2018
Wallagga Bahaatti loltoonni dubartii gudeedan hidhaan adabaman
''Raayyaan Ittisa biyyaa ummata tiksa malee hin dararu''
Daa'imman lakkuu abbaa garaagaraa qaban
Maatii kanniisa waliin mana tokko keessa bulan
''Lammilee Itoophiyaa saddeeti Tanzaaniyaatti awwaalaman''
''Mucaa intala fuudhuufi intalatu dura rukutame''
Guyyaa jaalalleewanii fi duula 'Yellow Movement'
Traamp Labsii biyyaalessaa yeroo balaa labsuufi
''Kanan dhiibame Raayyaa waanan ta'eefiidha''